Sachet Yaanyo Alaab-qeybiyeyaal iyo Warshad - Shiinaha Sachet Yaanyo Soo-Saarayaasha Dhirta
"Qalabka ugu wanaagsan ee dhadhanka ugu fiican!" Waxaan leenahay xakameyn tayo sare leh oo ku saabsan habka wax soosaarka oo waxaan siinaa adeegga fasalka koowaad macaamiisha caawimaad farsamo oo xoog leh. Waxaan rajeyneynaa inaan balaarino suuqyo badan oo aan la wadaagno saaxiibada aduunka si aan u abuurno mustaqbal ifaya oo ku saleysan faa iidada wadajirka ah. Marka lagu daro koollada yaanyada ee qasacadaysan, waxaan sidoo kale ku siin karnaa xirmo yaanyo ah, xirmooyinkayaga yaanyada waxay leeyihiin Flat Sachet iyo Standup Sachet. Cabbirro kala duwan, waxaan sameyn karnaa 50g 56g 70g 100g iwm ...
70g Sachet Tamaandho Dhaxan (Bac Flat)